OwnBackup: Mgbanwe Ọdachi, Mkpokọta Sandbox, Na Ebe Ndebe Ihe Ozi maka Salesforce | Martech Zone
OwnBackup: Mgbake Ọdachi, Mwepu Sandbox, Na Archival Data maka Salesforce
Afọ ole na ole gara aga, akwagara m ngwa ngwa ahịa m na ebe a maara nke ọma na nke a nabatara (ọ bụghị Salesforce). Ndị otu m haziri ma mepụta mkpọsa ole na ole na anyị na-amalite ịmalite ịkwọ ụgbọ okporo ụzọ dị ukwuu… ruo mgbe ọdachi dakwasịrị. Ikpo okwu a na-eme nnukwu nkwalite ma kpochapụ ọtụtụ data ndị ahịa, gụnyere nke anyị.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere nkwekọrịta ọrụ ọrụ (SLA) nke kwere nkwa oge, ọ nweghị ndabere na mgbake ike na ọkwa akaụntụ. Ọrụ anyị gafere ma ụlọ ọrụ ahụ enweghị ego ma ọ bụ ikike iji weghachi ya na ọkwa akaụntụ. Ọ bụ ezie na a ga-emezigharị atụmatụ anyị, atụmanya anyị na ndị ahịa anyị ọrụ kpochapụrụ. N'ezie, enweghi uzo iji megharia data di oke egwu ma bara uru. Echere m na anyị furu efu ọtụtụ narị puku, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ nde dollar na revenue. Ikpo okwu mere ka anyị pụọ na nkwekọrịta anyị wee hapụ mmemme ibe ha ozugbo.
Amụtara m ihe m. Akụkụ nke usoro ndị na-ere m ahịa ugbu a bụ ijide n'aka na nyiwe nwere ma ọ bụ nwee mbupụ ma ọ bụ usoro nchekwa API ma ọ bụ API siri ike nke m nwere ike weghachite data na oge niile. M na-adụ ndị ahịa ọdụ ka ha mee otu ihe ahụ.
Ulo oru di iche-iche nwere otutu nkwado ndabere na mpaghara snapshot backups wuru n’ime nyiwe ha maka nchekwa onwe ha, mana ngwa ndi a adighi enweta ndi ahia ha. Ndị nwe ụlọ CRM na-eche n'ụzọ na-ezighi ezi na n'ihi na data SaaS ha dị n'igwe ojii, echekwara ya.
69% nke ụlọ ọrụ ndị dị n'ime ahịa ahịa Salesforce kwenyere na ha adịghị njikere maka ọnwụ ma ọ bụ nrụrụ data.
Ndị ọrụ dịka Salesforce na-arụ ọrụ, na-agbanwe agbanwe, ma na-arụkọ ọrụ n'ogo ọsọ dị otu a na narị otu narị ndị mmepe na ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume ịzụlite ma jigide usoro ndị ahịa yiri nke ahụ maka ndị ahịa iji chekwaa ma chekwaa data ha. Ha lekwasịrị anya na nkwụsi ike nke usoro, oge, nchekwa, na ihe ọhụrụ… yabụ azụmaahịa ga-eleba anya na ngwọta ndị ọzọ maka ihe dịka nkwado ndabere na mpaghara.
Ọ dị mkpa ịkọwapụta na Salesforce abụghị isi ihe kpatara ọnwụ data. N'ezie, mụ onwe m ahụghị ha ka ha na-ebibi data ndị ahịa na mberede. Ihe ntanetị data emeela site n'oge ruo n'oge, mana ahụbeghị m ọdachi (kụọ aka na osisi). Ọzọkwa, Salesforce nwere ikike mbupụ maka nnukwu data enwere ike iji ya rụọ ọrụ, mana nke ahụ adịghị mma dịka ọ ga-achọ iwulite nkwado ndabere, ịhazi oge, ịkọ akụkọ, yana ikike ndị ọzọ gbara ya gburugburu ka ọ zuo oke. ọdachi mgbake ngwọta.
Kedu egwu ndị kachasị egwu data ụlọ ọrụ?
Mgbapụta Ransomware - Ozi dị oke egwu na nke dị nhịahụ bụ ebumnuche maka mwakpo ransomware.
Nhichapụ ihe mberede - overwriting ma ọ bụ ihichapụ data na-eme na mberede na ndị ọrụ.
Ule na-adịghị mma - workflows na ngwa na-abawanye ohere nke n'amaghị ama data ọnwụ ma ọ bụ ire ure.
Hacktivists - cybercriminals ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke ọha na eze kpughere ma ọ bụ bibie data.
Obi ọjọọ Insiders - ndị ọrụ ugbu a ma ọ bụ na mbụ, ndị ọrụ ngo, ma ọ bụ ndị ha na ha na-azụkọ ahịa nwere ezigbo ụzọ nwere ike imebi ihe ma ọ bụrụ na mmekọrịta adị njọ.
Rogue Ngwa - iji ngwa siri ike nke ngwa ndị ọzọ, enwere ohere mgbe niile na ikpo okwu nwere ike ihichapụ, overwrite, ma ọ bụ mebie data gị dị egwu.
Obi dị m ụtọ, Salesforce's API-mbụ obibia mmepe a ana achi achi onye ọ bụla atụmatụ ma ọ bụ data mmewere bụ n'ụzọ zuru ezu inweta via ha dịgasị iche iche nke ntinye ihe omume (API). Nke ahụ megheere ndị ọzọ ụzọ ka ha were oghere dị na mgbake ọdachi… nke Nwepu Aka arụzuola.
OwnBackup na-enye azịza ndị a:
Nkwado ndabere na mgbake - Chebe data na metadata site na iji ihe nchekwa zuru ezu, akpaghị aka na nkwado ndabere na mpaghara mgbake.
Salesforce Sandbox Seeding - Gbasaa data na igbe sandbox maka imeputa ihe ngwa ngwa na gburugburu ọzụzụ dị mma yana Seeding Sandbox Enhanced.
Ahịa data ahịa - Chebe data nwere ike ịhazi njigide ma mekwaa ka ọ dị mfe na OwnBackup Archiver.
Ugbu a ka Cargill na-eji OwnBackup anyị agaghị echegbu onwe anyị maka ọnwụ data ọzọ. Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu, anyị nwere ike iji ngwa ngwa tụnyere ma weghachite data niile mana iwepu data ọ bụla downtime.
Kim Gandhi, Ahụmịhe Ahụmịhe Ndị Ahịa na Onye Nwere na Cargill FIBI Division
OwnBackup na-egbochi gị ịhapụ ozi dị oke mkpa nke Salesforce CRM data na metadata nwere nkwado ndabere na akpaghị aka na ngwangwa, mgbake na-enweghị mgbake… na ọnụego nke dabara adaba na ọkwa onye ọrụ.
Hazie ihe ngosi nke OwnBackup
Tags: ịgbanweehacktivistsndi ojoo n’imenweghachiule na-adịghị mmaransomwarerogue ngwandị ahịaire ere ahịasalesforce nkwado ndabere na mpagharaahịa data data archivalndị ahịa ahịa mgbakeire ahịa igbe sandbox